Saribakoly potika voninkazo mora. Fomba fanampiny hanampiana loko sy hafaliana. | Asa tanana
Saribakoly potika voninkazo mora misy vilany voninkazo
Jenny monge | 20/07/2021 10:00 | Decor, asa-tanana, Asa tanana an-trano
Manao ahoana daholo! Amin'ny asa tanana anio dia homenay anao Safidy hafa hanamboarana sombom-boninkazo handravahana ireo faritry ny zaridainantsika avy any an-trano, ny lavarangana na ny tohatra misy anay. Izy ireo dia fomba mora, mampiala voly ary tsara tarehy hanome fifandraisana manokana an'ireo faritra ireo.
Te hahafantatra ny fomba anaovanao io saribakoly io ve ianao?
Lokoy ny loko izay ilainay mba hanaovan'ireo saribakoly. Raha ny momba anay dia nifidy feo mavokely sy manga izahay.
Ny dingana voalohany dia manaova sary kely avy amin'ny toerana itiavantsika ireo faritra voaloko samihafa amin'ny saribakolinay. Hasiantsika kapoka maivana mba tsy ho voamarika.
Izao no fotoana mahafinaritra hanomboka handoko isika. Ao anaty vilany no handokoana maso, vava, orona ary mena. Afaka manampy antsipiriany bebe kokoa isika raha tiantsika. Hampiasa ny marika izahay hanamboarana ny tarehy ary koa loko fotsy kely ho an'ny maso. Hoso-doko ho satroka ny tapany ambony amin'ny vilany.
Handoko ny akanjon'ilay saribakoly izahay, manampy antsipiriany toy ny voninkazo amin'ny akanjo sy ireo faritra manjaitra misy marika mainty.
Mandoko izahay ny vilany kely manao antsipiriany ny laces izay handehanany amin'ny tongotra.
farany lakaoly ny vilany izay mivadika ambony ambany izahay miaraka amin'ny lakaoly matanjaka toy ny silicone na miaraka amina visy sy kofehy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Saribakoly potika voninkazo mora misy vilany voninkazo
Ahoana ny fomba handravahana siny fitaratra amin'ny teknika decoupage
Voninkazo 7 hatao amin'ny taratasy na foam vita amin'ny fingotra